Filtrer les éléments par date : samedi, 20 avril 2019
Mitohy hatrany ny fanampiana ataon'i Kandida ho solombavambahoaka eto Toamasina I, Naharimamy Irmah.
Nanao hetsika goavana izy sy ireo mpiara-miasa aminy nanohana ireo mpitsabo, nitondra fanafody hitsaboana ireo olona rehetra mila izany.
Maro tokoa ireo olona tsy afaka mitsabo tena noho ny tsy fisiana, ka niteraka fanentenana ho azy ireo izao fitsaboana faobe izao.
Natory teo amoron'ny lalamby ary nampakatra ny ilan-tongony havanana teo ambony lalamby ilay tovolahy. Tsy tafalany ny tongony nony nandalo ny lamasinina ka voahosy tao ka tapaka niala tery niaraka tamin'ny kiraro.
Androany atoandro no niseho ny loza teo Ambohimanambola, Antananarivo Avaradrano.